China 2D pini bheji fekitori uye vagadziri | Kingtai
2D lapel pini inonyanya kuita mabasa akawanda uye inogona kushandiswa pazviitiko zvakasiyana! Use them for a payaway, award award souvenir, kusimudzira uye Yakanakisa kune emhando yepamusoro bhizinesi kukwidziridzwa, makirabhu nemasangano, aya mabheji anoratidza mhando yepamusoro hunyanzvi. zvese zviri pakati.
2D Lapel Pini yekutanga nhanho kubva kufa yakarova mapini
Iyo tsika kufa muforoma yakasungirirwa kubva kune ako anotenderwa mifananidzo,
uye iyo die mold inoshandiswa kutsikisa hunyanzvi hwako pane jira resimbi kana mhangura materail
Pakarepo mushure meizvozvo, yako dhizaini dhizaini yakatemwa kune chaiwo iwo marongero, nhanho yekutanga yapera.
Nhanho inotevera ruoko rwakakwenenzverwa, aya masimbi akasimudzwa akasimudzwa kumagirazi ekupedzisa, Ipapo chinotevera danho rekupaka, yekumira iwe unogona kusarudza akawanda mavara akasiyana
Goridhe Nickel (sirivheri) mhangura, uye nhema nickel (rima sirivheri / dema chrome), Nepo nzvimbo yakaunganidzwa izere enamel pendi. Diki odha inogona kunge iri basa remaoko, hug order inogona kunge iri kushandisa auto yekuzadza color muchina.
Isu tinoshandisa iyo Pantone mavara anogona kunge akasanganiswa chaizvo kune yega yega odha, tinogona kuvimbisa yako brand zviyero chaizvo izvo zvinotipa iyo yePantone nhamba.
Yako tsika dhizaini inogona kusanganisira anosvika matanhatu mavara uye inogona kuiswa chidhindo kune chero chimiro pamwe nesarudzo dzegoridhe, sirivheri, bronze kana nhema nhema yakapetwa kupera. Minimum yekuraira huwandu i100 pcs.
Isu tinopa YEMAHARA hunyanzvi uye dhizaini masevhisi neese marongero! Yedu DIY dhizaini chishandiso uye Pantone ruvara inoenderana sevhisi inova nechokwadi chako pini ndizvo chaizvo zvaunofungidzira. Humbowo hwese hwadzokororwa kusvikira iwe wagutsikana zvizere.
Zvadaro: Dhijitari Dhinda lapel pini